SIDOO LOO SOO CELIN KARAA AMNIGA MAGAALADA MUQDISHO? Qore : Cabdiraxman Yacqub Xasan | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Yaa masuul ka dhigay
Ninka shilinka dhaafsaday
Maati dhimasho lagu habay
Dadku maanay Dhaadayn
27 kii sanno ee u danbeeyay waxay shacabka soomaaliyeed la soo daalaa dhacayeen dhibaatooyin nololeed oo ay sabab u ahayd burburkii dawladii kacaanka . Shacabka soomaaliyeed waxay soo mareen xaalado amni karo , siyaasad xumo iyo dhaqaale xumo .
Iyagoo xukuumadihii u kala danbeeyay maamulida gayga somaliya ayna samayn waxqabad muuqda oo dhanka amniga , Sidoo kale waxaa dalka ka abuurmay kooxo diineedyo hubaysan kuwaas waxyeelo balaadhan u gaystay shacabka soomaaliyeed , waxayna cabad ku noqdeen hana-qaadada xukuumadihii kala danbeeyay ee soo maray somaliya , kuwaas oo somaliya ka fuliyay dilal qorsheysan iyo qaraxyo lagu beegsanayo xarumaha dawlada iyo meelaha sixmada ah ee dadku ku kulmaan .
⦁ Dib u habaynta Hay,addaha Amniga
⦁ Maamul daadajinta Laamaha Amniga
⦁ Hormarinta xidhiidhka ka dhaxeeya Hay,addaha amniga iyo shacabka
Dib u habaynta Hay,addaha Amniga
Tirinta iyo tayaynta hawl wadeenada Laamaha amniga ayaa ah isbadalka dhabta ah ee keeni kara hanaan amni oo laysku lahayn karo. Dhamaan hubinta hawl wadeenada Booliska iyo Nabad Sugida aqoontooda iyo xirfadooda.
Si loo helo xidhiidh caafimaad qaba oo dhex mara laamaha amniga iyo shacabka soomaaliyeed ayaa laga maarmaan ah, si loo sii xoojiyo loona sii hormariyo xidhiidhka ayaa waxaa laga rabaa laamaha amniga inay sameeyaan barnaamijyo iyo xaflado si wadar ah loo qabto kaas oo laga soo qayb galiyo dhamaan qaybaha bulshadu ka kooban tahay iyadoo lagu lafo gurayo arimaha saamaynta ku leh xidhiidhka laamaha amniga iyo shacabka.